Isiseko sokuThengisa okuhle nokubi | Martech Zone
Isiseko sentengiso elungileyo nembi
NgoLwesibini, Novemba 11, 2014 NgoLwesibini, Novemba 11, 2014 Douglas Karr
Kubonakala ngathi ubulumko yenye yezinto engafundwanga, iza neentlungu, uvuyo kunye namanye amava. Njengoko ndikhula ndikhula ngakumbi kwishishini lam, ndiye ndifumanise ukuba ixesha elininzi endilichitha ndibeka izinto endizilindeleyo, zingcono okanye zimbi iziphumo zikubathengi bethu. Ukuba ndithe ndiza kufumana into kwaye kuthatha ixesha elide kunokuba bendicinga - ulindelo oluphosakeleyo lubangela ukudana. Ukuba ndithi ndizakufumana into kwaye ndiyibonelele ngeprojekthi ukongeza komnye umsebenzi wexabiso-ndigqithile kulindelo kwaye umxhasi wonwabile.
Ndisilela kaninzi, kodwa isiseko sempumelelo yam kwishishini sihambelana ngokusondeleyo nolindelo endilubekileyo. Andikholelwa ukuba yinto epiphony- kodwa ndiyakholelwa ukuba sisiseko sentengiso elungileyo nengalunganga ngalo naliphi na ishishini kwi-Intanethi. Ukumisela ulindelo kuqikelelwa kakhulu. Sebenzisa iimeko, uphononongo lwamatyala, ubalo-manani, ukukhutshwa kweendaba, izithuba, uhlaziyo… yonke into esiyenzayo ihlala i malunga imeko ebaluleke kakhulu, hayi malunga neemeko ezizizo.
Kule veki bendiye eFlorida ukuya kwamkela umtshana wam ekubuyeni kwakhe okokuqala eGulf. Ndiqhube nenja yam, sayeka kakhulu. Kwenye indawo yokuphumla eFlorida, ndafumana olu phawu luhlekisayo ngaphezulu kwento yokuchama.
Ingxaki ngophawu, ewe, kukuba ngelixa ithengisa i-automation ye-urinal, kwi-smart butt efana nam, inika umyalezo wokuthengisa ohluke ngokupheleleyo, ongenakufikeleleka. Umsebenzi, ewe, awunazandla… oko kungamangalisa kodwa kunokwenzeka ukuba akukho semthethweni.
Kuya kufuneka silumke ngolindelo sentengiso esilubekayo. Ngelixa injongo yethu isenokuba kukunxibelelana nenkqubela phambili kunye notyalo-mali esilwenzayo, oko akuthethi kuthi kunxibelelane nomyalezo ofanayo kubaphulaphuli bethu.
Ukusetha ulindelo oluchanekileyo, olufikelelekayo kwimizamo yakho yokuthengisa kuya kukunceda uchonge kwaye uvale abathengi abafanelekileyo, okukhokelela ekwandeni kokugcinwa kunye nexabiso elikhulu labathengi. Ukuseta ulindelo olubi akuyi kukhokelela kuphela kumazinga aphezulu okutsala, kunokuqhuba nokuvavanywa okungalunganga kunye nengxoxo yentlalo kwi-Intanethi. Oku, nako, kunokuqhuba ishishini kude elinokuba ngabathengi abalungileyo.
Isiseko sentengiso yonke ukubeka ulindelo olukhulu. Intengiso enkulu ikhokelela kubudlelwane obukhulu babathengi, obukhokelela ekwakheni igama elihle kwi-intanethi… elikhokelela kubathengi ababalaseleyo.
tags: lindelehlekisaayibekwa zandla
Yakha ii-CTAs kwaye usasaze njengeeNtengiso zeBanner ngeBannersnack
Izixhobo ezi-5 eziya kuphucula iziphumo zakho kwiBlogging
Nov 13, 2014 kwi-3: 38 AM
Molo Mnu Karr
Yonke inqaku olibhalileyo lilungile njengemvula.
Ukuseta ulindelo lwangempela endaweni yezona zintle kunokubangela iziphumo. Intengiso elungileyo nembi yiyo yonke imidlalo yokumisela ulindelo.
Kwaye kufuneka nditsho umzekelo osinike wona yingqondo ephefumlayo… .LOL
Nov 21, 2014 kwi-9: 24 AM
Iposti enkulu -ndandisile kwesi sihloko kwibhlog yam yamva nje. Ndingazukiswa ngokwenene ukuba ungayijonga kwaye undinike ingxelo? https://www.linkedin.com/pulse/article/20141121125524-103311141-are-marketers-living-up-to-customer-expectations-this-christmas
Nokuba yeyiphi indlela, qhubeka nomsebenzi olungileyo!